john royster a dit…
Mila fanampiana ara-bola ve ianao?
Manome loka farafahakeliny $ 1,000.00 fara-fahakeliny izahay
$ 500,000,000.00 miaraka amin'ny faharetana mety amin'ny 1 hatramin'ny 30 taona
amin'ny 2% ny fihenam-bidy.
Mila trosa ara-barotra ve ianao?
Mila trosa manokana ve ianao?
Te-hividy fiara ve ianao?
Mila trosa findramina ve ianao?
Mila trosa handoavana ny trosanao ve ianao?
Mila vola be ianao hanombohana ny tolo-kevitry ny orinasa na
fanitarana? Very fanantenana ianao ary mihevitra ianao fa tsy misy lalana mivoaka ary
Mbola mitohy ny enta-mavesanao?
Aza misalasala manatona anay amin'ny raharaham-barotra.
Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)
Tale mpanatanteraka (CEO)
6 juin 2018 à 14:01
17 juillet 2018 à 13:35